मेल कर्नर(Male Corner) in Nepalese Women: All about women in Nepal -
जेठ १६, नेपालगञ्ज । मानिसको बाहिरी आँखा जति सुन्दर र मनमोहक सुन्छ, त्योभन्दा अझ धेरै मनको आँखा प्रभावकारी हुन्छ । बाहिरी आँखाले नदेख्नेलाई सबैखाले अवसर उपलब्ध गराउनाका साथै माया पनि गरियो दृष्टिविहीन र न्यूनदृष्टि भएकाहरु प्नि सामान्य मानिस जस्तै सबल र सक्षम हुन सक्छन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ३७ वर्षीय...
‘राष्ट्रिय कलाश्री सम्मान - २०७५’ वैरागी काइँलालाई
चैत २७, काठमाडौं । यस वर्षको ‘राष्ट्रिय कलाश्री सम्मान–२०७५’ नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठनका पूर्व कुलपति वैरागी काइँलालाई प्रदान गरिने भएको छ । नेपाली कलासाहित्य डटकम प्रतिष्ठानले विगत ११ वर्षदेखि हरेक वर्ष भाषा, साहित्य, कलासंस्कृति र सङ्गीतका साधकलाई प्रदान गर्दै आएको उक्त सम्मान यसवर्ष उहाँलाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको ...
७० वर्षीय दलबहादुरको डोको बुनेरै बित्यो जिन्दगी
फागुन १९, गलेश्वर । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीका ७० वर्षीय दलबहादुर विकले आफू जान्ने भएदेखि अहिलेसम्मको उमेर डोको बुनेरै बिताउनुभयो । जीवनका अनेकौँ घामपानी भोगेका विक अहिले डाँडामाथिको घाम जस्तै कति बेला अस्ताउने हो पत्तै छैन तर उहाँको जाँगर र जोश भने १६–१७ वर्षे जवानको जस्तो देखिन्छ । घरको पिँढीमा बसेर नातिनातिनी...
माघ २७, हुम्ला । हुम्लाको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको सर्केगाड गाउँपालिका–४ बस्ने दन्तबहादुर शाहीको व्याट्री फड्किँदा एसिडले जलेर दुवै आँखा बन्द भएको छ । जिल्लामा शनिबारदेखि मौसम सुधार आएसँगै घाममा व्याट्री सुकाउन जाने क्रममा व्याट्री पड्किँदा एसिडले जलेर दुवै आँखा नदेख्ने भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका सूचना अधिकारी हरिहर...
डा. कोषप्रसाद न्यौपाने पुस २९, काठमाडौं । नेपालमा महिलामाथि हुने यौन हिंसा धेरै बाहिर आइरहनुले यस्ता घटनाहरू विगतमा भन्दा अहिले धेरै बढिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। अमेरिकादेखि भारत हुँदै नेपालमा पनि भित्रिएको ‘मिटु’ अभियानको प्रभावले केही शक्तिशाली भनिने व्यक्तिको इतिहासलाई पनि उजागर गरिदिएको छ । यौन दुव्र्यवहार समाज, समय,...
सिन्धुलीदेखि पोर्चुगलसम्मको यात्रामा कहिल्यै नथाकेका कुमार श्रेष्ठको प्रेरणदायी जीवन
कुमार श्रेष्ठ पोर्चुगलमा पुगेर होटल व्यवसाय गर्ने पहिलो नेपाली हुन् । उनले हाल अन्नपूर्ण रेष्टुरेन्ट लगायताका चार वटा होटल पोर्चुगलमा संचालनमा ल्याएका छन् । ►शकुन्तला कटुवाल (पाठक) पुस १७, काठमाडौं । जन्मिएपछि हामी बाँच्छौं । तर, कस्तो जीवन बाँच्छौं भन्ने कुरा हाम्रो कलाको कुरा हो । कसैले गुणस्तरिय जीवन बाँच्दछन्, कसैले...
हरिकुमार श्रेष्ठ, नेपालको सेयर बजारको दुई दशकसम्मको अवधिमा चर्चाको शिखरमा रहेको एउटा नाम हो । सेयर बजारमा हालसालै छिरेका नयाँ लगानीकर्ताका लागि यो नौलो नाम भए पनि पुराना लगानीकर्ताका लागि यो परिचित नाम हो । सन् २००१ देखि शंकरदेव क्याम्पसमा अध्यापनरत उनै श्रेष्ठ नेपाली सेयर बजारका कुनै बेलाका एक कुशल खेलाडी मात्र होइनन्, सेयरबाट सोच्दै...
धरानमा नेबुला फूड्सको चर्चा, स्वदेशमै अध्ययन गरि उद्यमी बनेका दुई युवाको सपना साकार हुँदै
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । परम्परालाई प्रविधिको उच्चतम सदुपयोग र आफ्ना गुरुको प्रेरणादायी उद्गारले २ युवाहरुको सपना पूरा भएको छ अर्थात् धरानमा नेबुला फूड्स प्रा.लि.ले उत्पादन गरेका मासुजन्य अचार, सुकुटी, ससेज लगायतका उत्पादनले धरान र आसपासको क्षेत्रको बजारमा चर्चा कमाइरहेको छ । माछाको ससेज र मिटबल उत्पादन गर्ने नेबुला नेपालकै...
असोज ७, काठमाडौं । म ससुरालीमा थिएँ, अवसर थियो सालीको बिहे। म र मेरी श्रीमती सोनालीसँगै परिवारको नयाँ सदस्य थिई हाम्री छोरी। मेरी श्रीमती वैवाहिक कार्यक्रममा व्यस्त थिइन् र छोरी मसँग थिई। छोरी मसँगै बस्न मन पराउँथी। हामी गफमा व्यस्त रहेका बेला छोरीले दिसा गरी। छोरीको दिसा सफा गर्न म जानै लाग्दा मेरी सासुआमाले रोक्नुभयो। घरको एउटा...
६ हजार तलब खाने कमल भट्टराई बने सफल उद्यमी
भक्तराज रसाइली असोज ७, काठमाडौं । नेपाली समाज आज पनि कामलाई हतपत सम्मान गर्न चाहदैन । कामको आधारमा ठूलोसानो र उचनिच भन्ने प्रवृतिका कारण नै मुलुक आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको देखिन्छ । कामलाई सानोतिनो नठानी लण्ड्री व्यवसाय गरेर नाम र दाम नेपालमा नै कमाएका कुबेर कमल भट्टराई महिनाको एक लाख सहजै कमाउँछ्न् । उनको संघर्षपूर्ण...
राजनको अगाडि फिक्का भो अमेरिकी सपना
-भक्तराज रसाइली साउन २३, काठमाडौं । विश्वका प्राय हरेक मुलुकका युवामा अमेरिका टेक्ने सपना हुन्छ । अमेरिका वा युरोप गएर सुखमय जीवन जिउने सपना बुन्नेहरु विश्वभर नै भेटिन्छन् । नेपालका युवापुस्तामा समेत अमेरिका र यूरोप मोह उस्तै छ । यहीकारण वर्षेनी कानूनी र गैरकानूनी बाटोबाट अमेरिका र यूरोप भाँसिने युवाहरुको समेत कमी छैन । तर, अमेरिका वा...
सडकमा भुइँकटहर बेचेरै दैनिक नौं हजार कमाइ
साउन ४, काठमाडौं । काठमाडौंको बत्तिसपुतली सडकमा भुइँकटहर बेचेरै केशव मल्ल दैनिक नौं हजार कमाइ गर्छन् । नवलपरासीस्थित परासी बजारका स्थायी बासिन्दा मल्ललाई उपत्यकामा प्रवेश गर्दा ठेलामा भुँकटहर बेचेर यति राम्रो कमाइ होला भन्ने थिएन । आफ्नै देशमा थोरै लगानीमा आकर्षक व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका मल्ल जस्ता व्यवसायीे...
अन्तरराष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार मेनहर्टलाई
असार १९ काठमाडौं । डा डिल्लीरमण रेग्मी प्रतिष्ठानले इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्वविद् हरेराम जोशीलाई डा डिल्लीरमण रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार तथा नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि क्रिष्टियन मेनहर्टलाई अन्तराष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार डा. डिल्लीरमण रेग्मी पुरस्कार–२०७४ आज प्रदान गरेको छ ।रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कारको...
क, ख सिक्दै असी वर्षमा अम्मरबहादुर
भदौ ४, म्याग्दी । बेनी नगरपालिका– १ रत्नेचौरका एक वृद्ध ८० वर्षको उमेरमा कक्षा १ मा भर्ना भएर पढ्न थालेका छन् । रत्नेचौरको उपल्लाचौरका ८० वर्षीय अम्मरबहादुर थापा स्थानीय नेशनल एकेडेमीको कक्षा १ मा भर्ना भएर अध्ययन गर्न थालेका हुन् । गत वैशाखमा भर्ना भएका थापा नियमित विद्यालय आउने र अरु विद्यार्थीसँगै बसेर पढ्ने गरेको नेशनल...
दीपेशकुमार केसीलाई विद्यावारिधि
काठमाडौँ, २ भदौ । पत्रकार तथा अनुसन्धानकर्ता दीपेशकुमार केसीले भारत, नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट नेपाल भारत सीमा विषयमा विद्यावारिधिको उपाधि पाउनुभएको छ । स्कुल अफ सोसल साइन्सअन्तर्गत रहेको सेन्टर फर सोसल सिष्टमबाट ‘युथ इन इन्डो नेपाल क्रस बोर्डर क्राइम’(नेपाल भारत सीमा वारिपारि हुने अपराधमा युवा) विषयमा...